Faa'iidooyinka mashiinka calaamadaynta otomatiga ee sumadaynta madaxa
Waxa loogu yeero calaamadaynta mashiinka calaamadaynta otomaatiga, guud ahaan loogu yeeraa heer sare oo qalabka calaamadaynta otomaatiga ah, inta badan kontoroolada servo (PLC), noocyo kala duwan oo shaqeynaya iyo mashiinka sumadaynta otomatiga ah ayaa la hagaajiyay.
(1) Mashiinka sumadaynta iswada ee otomatiga ah guud ahaan wuxuu qaatay nidaamka (tillaabada) si loo kontoroolo madaxa calaamadaynta, iyo xawaaraha calaamadaynta waa 20-45 gogo 'daqiiqaddii. Mashiinka calaamadaynta otomaatiga waxaa xukuma nidaam (servo) leh xawaare ah 40-200 gogo 'daqiiqaddii. Waxqabadka kala duwan, dhalidda ayaa si dabiici ah u kala duwan.
(2) Hawsha mashiinka sumadaynta sumadda ee otomatiga lagu calaamadiyo madaxa guud ahaanba waxay u baahan tahay in lagu fuliyo alaabada gacanta lagu haysto, oo leh qalad ballaaran iyo dhib xagga xakameynta saxnaanta. Mashiinka calaamadaynta otomatiga ah waxay qaadataa sumadaynta tuubbo isku mid ah, boos kala-saarid otomaatig ah, calaamadeynta sax ahaanshaha 1mm.
(3) Intooda badan mashiinka calaamadaynta nus-daabacaha madaxa, badeecada calaamadaynta ayaa xaddidan, iyada oo aan qaybaha gaarka ah lagu isticmaali karin makiinad keliya, sidaa darteed waxaa badanaa loo isticmaalaa soosaarayaasha aqoon-isweydaarsiga yar. Mashiinka calaamadaynta otomatiga ah way kala duwan yihiin, qalabku wuxuu leeyahay howlo badan oo kala duwan, kaas oo loo adeegsan karo qeexitaanno kala duwan iyo cabbirro badeecado isku mid ah, isla markaana ku calaamadeeya jagooyin kaladuwan.
Qalabka waxaa ku qalabeysan madax sumeysan oo sax ah, kaas oo si is beddel leh ugu wareegi kara sumadaha X, Y iyo Z faasas. Marka la calaamadinayo, silsiladda silsiladda silsiladda ee soo-saareynta baakadaha ayaa loo istcimaalayaa miiska shaqada, alaabooyinka la keenayna waxaa lagu calaamadeeyay meesha sahaminta indhaha ee korantada saxda ah. Saxnimadu waa ± 1 mm Qalabku wuxuu leeyahay shaqo aan lahayn calaamadayn iyo is-hagaajin otomatik ah oo aan calaamadayn.
Isku soo wada duuboo, astaamaha qalabka wax lagu tilmaamo ayaa lagu dhejin karaa alaabada kala duwan ee diyaaradda, qaanso iyo boosas kale. Meelaha kale ee sumadaynta madaxa calaamadaynta waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo la tixraacayo shuruudaha isticmaaleyaasha, iyo qalabka u dhigma waa lagu dari karaa waana la isu gayn karaa si loo gaaro hawlgallo summaddeyn kala duwan.